Filtrer les éléments par date : mercredi, 14 août 2019
mercredi, 14 août 2019 20:22
Morondava: Mpanao trafika hazo arovana tafatsoaka teny ampelan-tanan’ny Zandary
Hazo sarobidy, hazo arovana, toy ny voamboana aman-jatony isa no sarona tao amina tranon’olontsotra iray tao Bemanonga, Distrikan’i Morondava, Faritra Menabe nandritra ny fisavana niainga tamina loharanom-baovao ny alakamisy 8 aogositra 2019.
« Natolotra ny Zandarimaria teto Morondava ilay olona. Indrisy anefa ary mahagaga fa votsotra ary nitsoaka ilay olona ka ankehitriny dia apetraka amin’ny Fitsarana ny tohin'izao raharaha izao », hoy ny avy amin'ny foibem-paritry ny tontolo iainana Menabe.
mercredi, 14 août 2019 20:03
Antohomadinika-Antananarivo: Voasambotra i Lavasanga mpamaky trano
Jiolahy malaza ratsy amin’ny famakiana trano i A.M.J fantatra amin’ny anaram-bositra hoe : Lavasanga. Amin’ny ora izay ivoahan'ny olona ny trano, amin’ny ora fiasana amin’ny 8 ora maraina hatramin'ny 4 ora hariva, izy no manararaotra. Iny faritra Antohomadinika sy Vassacos, Antananarivo iny no tena lasibatrany.
Omaly talata 13 aogositra 2019 tokony tamin’ny 10 ora maraina i Lavasanga no tratran'ny Polisy ambodiomby nanao ity asa ratsy ity. Tamin’io fotoana io dia nihevitra izy fa tsy tao ilay tompontrano fa lasa niasa saingy tsy izay no zava-nitranga fa nijanona tao ilay tompontrano fa tsy niasa no efa tafiditra tao izy.
Teo ampibatana ny entana mihitsy i Lavasanga no tratran'ny Polisy satria nampandre avy hatrany ny tompontrano, ary dia tonga haingana ny Polisy. Natolotra ny Fampanoavana androany izy ary notanana am-ponja vonjimaika eny Antanimora.
mercredi, 14 août 2019 20:00
FIP Toliara: Nahatratra mpamatsy basy dahalo
Ny 11 aogositra 2019 lasa teo tany Tsimenatra II Toliara dia lehilahy 01, 26 taona no voasambotry ny Polisy miasa ao amin’ny « Force d’intervention de Police » FIP Toliara noho ny resaka fanamboarana basy vita gasy.
Andro maromaro talohan’io dia nahazo loharanom-baovao ny Polisin’ny FIP Toliara fa misy lehilahy 01 manamboatra sy mivarotra basy any amin’iny faritra iny. Natao ny fanarahan-dia ka tra-tehaka tao Tsimenatra II ilay tovolahy voalaza fa tompon’antoka amin’izany.
mercredi, 14 août 2019 14:21
Fandaharanasa Fihariana: Nisitraka ny tantsahan’i Manandona sy Andranomanelatra - Antsirabe II
Nidina taty Antsirabe II, nijery ireo tetikasa nahazo tohana ara-bola avy amin’ny fandaharanasa Fihariana, sady nihaino ny hetahetan’ireo tantsaha, ny filoha Andry Rajoelina ny talata 13 aogositra 2019.
Eo ny tetikasan’ny fikambanana Avotra, ao amin’ny Kaominina Manandona, izay hanatsara ny famokarana ovy sy haricot vert, ankoatran’ny fambolem-bary, eo amina velaran-tany mirefy 30Ha, ary koa ny fampiroboroboana ny vokatra asa-tanan’ny mpikambana ao aminy.
mercredi, 14 août 2019 14:20
Rugby - Women's Cup 2019: Nomontsanin’i Afrika Atsimo i Madagasikara
Resin’i Afrika Atsimo tamin’ny isa 73 noho 00 ny Makis an’i Madagasikara omaly, tamin’ny lalao faharoa natrehiny amin’ny Women's Cup 2019 tanterahina ao Johannesburg atsy Afrika Atsimo.
Niondrika nanoloana an’i Kenya tamin’ny isa 35 noho 05 i Madagasikara tamin’ny lalao voalohany natrehiny tamin'ny zoma 9 aogositra 2019.
mercredi, 14 août 2019 13:48
Fantatrao ve: Mbola azo ho anina na ampiasaina ve ireo sakafo lany daty?
Vao manokatra vata fampangatsiahana isika, na mijery na hividy ireny sakafo ireny, dia ny fahazarana voalohany dia mijery ny daty misoratra amin'ireny boaty ireny.
Misy daty 2 na 3 matetika amin'izy ireny, ny daty voalohany, ny daty nanamboarana ilay sakafo, na "date de fabrication", ny daty faharoa, dia ny daty fetra fihinanana ilay sakafo, na "date de péremption", na "date limite de consommation" (DLC), io ilay misy soratra hoe "ho hanina alohan'ny..." na "A consommer avant...", ary indraindray misy daty fahatelo, date limite d'utilisation optimale (DLUO), na hoe "Tsara ho hanina alohan'ny..." na "à consommer de préférence avant…".
Ireo karazan-tsakafo mora simba, toy ny yaourt, ronono, trondro... no tsy azo ihoarana satria misy bakteria na salmonela mitombo ao anatiny, nefa raha tsara tahiry anaty vata fampagatsiahana izy ireny, dia afaka mihoatra 24-48 ora eo. Anisan'ny amatarana ny fahasimbana, na dia tsy tapitra aza ny daty, ireny sarona mibontsina ireny.